आज भाइटीका, ११ बजेर ५५ मिनेटको साइत ! - आज भाइटीका, ११ बजेर ५५ मिनेटको साइत !
आज भाइटीका, ११ बजेर ५५ मिनेटको साइत !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २३ कार्तिक, 08:19:00 AM
काठमाडौँ । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ दिन आज भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई मनाइँदैछ ।
२०७५, २३ कार्तिक, 08:19:00 AM
अन्जली दिदिको हातबाट २ सय दाजुभाइले लगाए भाइटीका